ALAABAA QABSOO BILISUMMAA OROMOO QABATANII IRREECHAA HIN DEEMINAA? Kichuu
HomeAfaan OromooNewsALAABAA QABSOO BILISUMMAA OROMOO QABATANII IRREECHAA HIN DEEMINAA?
ALAABAA QABSOO BILISUMMAA OROMOO QABATANII IRREECHAA HIN DEEMINAA?
Alabaan qabsoo bilisummaa oromoo akka Alaabaa gammoojjii #Adeettitti harka #Wayyaaneen hojjetamtee sana miti. Alaabaan Adeetitti hojjetamee OPDON qabattee waggaa 28 guutuu ittin biyya ” bulchite” sana har’a ilmaan Oromoo OPDO keessa jiran baayyee xireefatu. Kanaaf OPDOn itti qaanofti. Oromoon OPDO hin taane ammoo baayyee ajeefata.
Alaabaa qabsoo bilisummaa Oromoo garuu Oromoo biratti #kabajaa fi #ulfina addaa qaba. Alaabaan kuni as gahuuf Lafee, lubbuu, dhiiga Oromoo kitilaan lakkaa’amutti itti dhangalahe. Alaabaa kana keessatti #Bilisummaa fi #walabummaa Oromiyaatu mul’ata.
Garuu Alabaan kuni warra gantootaatti waan salphaa fakkaatti. Mataa isaan dhukkubsiti. Isaan sodaaachisti. Yoo Alaabaa kana argan lapheen isaan rukutti. Fincaantu isaan qabata. Warri habashootaas akkuma gantoota kanaa rommu’u.
Warri OPDO fi Ergamtoonni Kana hundaa kan ta’an #SODAA #HABASHOOTAf. Yoo Oromoon Alaabaa kana qabatee bahu HABASHAAN waan biyyi diigamtu, waan har’a oromiyaa keessaa morma qabamanii ari’aman itti fakkaata. Kana waan taheef Habashoonni warra OPDO fi ERGAMTOOTA ISHEE akeekkachiisu. OPDON harki caalaan ishee diqaalaa waan taateef gama kanaanis dhiibbaa jala jirti. Egaa OPDO fi ERGAMTOONNI ishee #SODAA #HABASHOOTA qabdu irraa kaatee “ALAABAA DHAABA KAMUU QABATTANII AKKA #IRREECHA HIN DEEMNE “jettee uummatatti afaan banti.
Garuu kanumti nuuf galuu dide OPDO fi ERGAMTOONNI OPDO warri ALAABAA OROMOO QABATTANII IRREECHAA HIN DEEMINA NUUN JEDHAN, yeroo Habashaan Alaabaa #Minilik isa #Lummuxxii sana GUYYAA GUYYAAN #BATASKAANA irratti fannisanii sirbaa Oolan maaf hin dubbatanidha. Sanumaayyuu otoo Naannoo biraa keessatti tahee nu hin ajaa’ibu. Kan habashoonni Alaabaa kana fannisaan Bataskaanota Oromiyaa keessatti argan irrattidha. Finfinnee, godinoota addaa naannoo Finfinnee maraa ilaala. Guyyaa guyyaan Alaabaan lummuxxiin suni ni fannifama. Takkaa #Maaramii, #Gabreelii, #Mikaa‘elii, #Uraa‘eelii, Giyoorgisiitu #Naggasa, kan #waggaatii, wal irra bu’e QEBEXERSOO jedhanii waggaa guutuu alaabaa minilik nurratti sirbisiisu. OPDOn kana xis hin jettu. ERGAMTOONNI ishees akkasuma. Yeroo maraa ALAABAA OROMOO, QEERROO OROMOO, DHAABOTA OROMOO WALABA ta’an #DHIIBAA, #KOPHXEESSAA Oromiyaa bulchuuf xeferferuun hin danda’ama.
Gabaabumatti QEERROON OROMOO ALAABAA OROMOO BAKKA BU’U, KAN QEERROO FI QABSAA’ONNI KITILAAN LAKKA’AMA ITTI WAREEGAMAN QABATANII BAHUUN,
——-Habashaa lafa ilaalchisuu
——-OPDO fi ERGAMTOOTAAF ergaa cimaa dabarsuu
——–Habashoota Finfinnee irraa wacaa jirtuuf ergaa dabarsuufii
——–Alabaa keenyan faayamnee addunyaatti beeksisuu
——–Alaabaa keenyaan faayamnee #ekeraa GOOTOTA keenyaa boqochiisuun Dirqama Oromummaa bahuu qabna. OPDO fi ERGAMTOONNI ishee waggaa lama guutuu nu gowwomsite MIRGA KEENYA ISA WAREEGAMA QEERROO FI QARREE KUMA 6000 OL itti dhumnii arganneyyuu dabarsanii HABASHAATI GURGURATANI. Gurra isaaniif kenninaan har’a gurra nu miciiraa jiru. Nuuf obsaa, wal haa dhaggeeffannu, gooftaan keenya saba keenya, gaaffii uummata keenyaa gadi teenyee tokko tokkoon deebisni jedhanii WARAANA GUDDAA KAABA BIYYATTI IRRAA FIDUUN OROMIYYAA ITTIIN DHIIGAAN JIRU.
Kanaaf Otoo habashaan alaabaa Minilik qabatee nurratti sirbituu alaabaa lubbuun oromoo itti wareegama golatti ol deebsnee harka qullaa hin deemnu.
Warri OPDO fi ERGAMTOONNI ishee yoo fedhan ALAABAA MINILIK sana HAADHA MANAA ( ABBOOTIIN WARAA) ofiif Huccuu isaa hodhisiisaniifi waggaa haaraa Habashootaa kanatti haa kennaniif.
Must Listen: Dubbiin kun garamitti deemaa jirti? Magalata waraanaa kana laalaa.
OMN:በወቅታዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ በማለዳ ሚድያ እና በዶክተር ጸጋዬ አራርሳ መሀከል የተደረገ ውይይት